प्राचीन ग्रीस को मिथक वाक्पद्घति: इतिहास र modernity
मिथक - इतिहासको धेरै प्रारम्भिक चरणमा देखा छ कि एक narrative। र आफ्नो शानदार चित्रहरु (पौराणिक नायक, देवताहरूको) व्याख्या र धेरै प्राकृतिक घटना सारांशमा गर्न प्रयास एक प्रकारको छ, घटनाहरू समाजमा स्थान लिइरहेको छ। पौराणिक कथाहरु मा वास्तविकता गर्न व्यक्तिगत सौंदर्य मनोवृत्ति र नैतिक दृश्य प्रतिबिम्बित। सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय आज प्राचीन ग्रीस को मिथक हो। तिनीहरूलाई थुप्रै साहित्य मा र रीतिथितिहरू प्रयोग गरिन्छ। ग्रीक पौराणिक कथाहरु को एक idioms - सबैतिर सुनेको सकिन्छ कि अभिव्यक्ति हो। तथापि, सबैलाई एक वा अर्को क्याच वाक्यांश जहाँ स्रोत थाह छ। त्यसैले हामी प्रयोग मिथक idioms र किन केही हेरौं।
त्यहाँ एक पूर्ण गडबड छ जहाँ पनि फोहर क्षेत्रहरु, कुरा गर्दा हामीले प्रयोग यो वाक्यांश। वा हामी उद्यम संगठन, सबै कुराहरू चलिरहेका छन् जहाँ कल। हामी किन यति भन्छन्? धेरै वर्ष को लागि क्रममा कुराहरू राख्नु छैन भनेर Augeas - यो Elis राजा को विशाल सम्पत्ति हो - तथ्यलाई ग्रीक पौराणिक कथाहरु Stables डाटा मा छ। र म Stables मार्फत नदी Alpheus दिने, तिनीहरूलाई शुद्ध एक दिन हर्कुलेसक्लस्टर। पानी र यो माटो लगे। प्राचीन ग्रीस को मिथक यस वाक्पद्घति को इतिहासकार सिसीली को Diodorus गर्न प्रसिद्ध धन्यवाद भयो। यो पहिलो यो मिथक बारेमा भन्नुभयो जसले थियो।
Ariadne गरेको मुद्दा
यो एक तरिका एक कठिन अवस्था बाहिर तरिका फेला पार्न मद्दत गर्न प्रतीकात्मक अर्थ जो संभावना, सुत्र प्राचीन ग्रीस, को मिथक अर्को वाक्पद्घति छ। पौराणिक कथाहरु मा Ariadne - Pasiphae छोरी र Minos नाम Cretan राजा हो। राजकुमार क्रेते, Theseus मा आइपुग्दा, अन्य मान्छे Minotaur द्वारा devoured गर्न साथ बर्बाद, त्यो उहाँलाई प्रेम गर्नुभयो। एक Minotaur त्यहाँ संक्रमण को एक विशाल संख्या थियो जहाँ labyrinth, बस्थे। एक दिन त्यहाँ जा, मान्छे फिर्ता कहिल्यै प्राप्त हुनेछ। Ariadne Theseus राक्षस गर्न प्राप्त, यार्न कि मान्छे unwinding को ठूलो बल दिनुभयो। को Minotaur हत्या पछि, Theseus सजिलै छाला मार्फत कोठा बाहिर हिंडे।
OBLIVION मा डुब्नु
को underworld बिताएको थियो जो गर्मी, - ग्रीक पौराणिक कथाहरु मा, OBLIVION को नदी थियो। मृतक व्यक्ति को प्राण यो स्रोतबाट पानी प्रयास गर्दा, त्यो पृथ्वीमा सबै जीवनको बारेमा बिर्सन्छन्। प्राचीन ग्रीस को मिथक यस वाक्पद्घति छ - एक ट्रेस बिना गायब, कुनै एक थाह जहाँ पातालमा, आदि
भाग्य को पाङ्ग्रा
पौराणिक कथाहरु मा, Fortuna - आनन्द र दुख, अन्धा मौका को को देवी। सधैं पाङ्ग्रा वा बल मा खडा चित्रण गरिएको छ, blindfolded। राम्रो-जा संकेत एक cornucopia, जो देवी दिन सक्छ - एक हातमा त्यो स्टेरिड़, भाग्य मानिसको भाग्य निर्णय भनेर भन्छन् जो, र अन्य छ। पाङ्ग्रा वा बल यसको स्थिर variability देखाउँछ। प्राचीन ग्रीस को मिथक यस वाक्पद्घति प्रयोग गरेर हामी मौका अन्धा गर्न भाग्य सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ।
यो हामी लगभग हरेक दिन प्रयोग गर्ने अर्को वाक्पद्घति छ। पौराणिक कथाहरु मा प्रतिबंध - बगाल र गोठालाहरूले परमेश्वर। व्यक्ति त्यस्तो डर उहाँले पनि सडक केही मृत्यु नेतृत्व गर्नेछन् भन्ने तथ्यलाई बारेमा सोच छैन, aimlessly सर को बल चलाउन भनेर राखिदिन गर्न सक्षम छ प्रतिबंध। यसैले मानव कवर जो अचानक, अविवेकी डर, अर्थ जो अभिव्यक्ति।
एक अल्पविराम अघि "कसरी" आवश्यक छ कि छैन? शब्द "जस्तै" वा अघि अल्पविराम?
वा "बारे" "खातामा": लेखन नियम
पौडी पोखरी - एक ... वचन को अर्थ, morphological र syntactic सुविधाहरू
Nouns संग "कुनै"। ठीक लेख्न
Aphorism - यो के हो? शब्द "aphorism" को lexical अर्थ
उदाहरण, साधारण: शब्द को मूल मा Unpronounceable consonants। शब्द को मूल मा Unpronounceable consonants: ग्रेड 3
सेंट सेन्ट पीटर्सबर्गमा सेतो रातो हुँदा त्यहाँ कुन ठाउँहरू भेट्न सकिन्छ? यो घटना किन हुन्छ र कति लामो समय लाग्छ?
डज डार्ट ( "डज डार्ट"): विनिर्देशों, मूल्यहरू र समीक्षा (फोटो)
टरिफ "सुन्तला", "टेली 2" - समीक्षा। टरिफ "सुन्तला", "Tele2" - कसरी जडान गर्ने
"Makita" - परिपत्र देख्यो: एक अवलोकन, सुविधाहरू, दृश्य र समीक्षा
कफ संग खोकी को उपचार
मिश्र। राजधानीको मानचित्र मिश्रको भौगोलिक स्थिति
10 को उमेर मा फरक: तपाईं बीच chasm?
कति गिनी सुँगुरहरु बाँच्न र तिनीहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने